RASMI: Jurgen Klopp Oo Shaaciyay Muddada Ay Ciyaartoyda Kooxdiisa Liverpool Fasaxa Galayaan. - Gool24.Net
RASMI: Jurgen Klopp Oo Shaaciyay Muddada Ay Ciyaartoyda Kooxdiisa Liverpool Fasaxa Galayaan.
July 26, 2020 Mahamoud Batalaale
Tababaraha kooxda Liverpool ee Jurgen Klopp ayaa shaaciyay muddada ay fasaxa ku maqnaan doonaan xidigaha kooxdiisa ee koobka Premeir League ku soo guulaystay waana muddadii abid ugu yarayd ee ay ciyaartoyda Reds fasax ku maqnaan doonaan labada xili ciyaareed dhexdooda.
Iyada oo saddex bilood lagu lumiyay go’doonkii karoonaha intii xili ciyaareedkan lagu jiray waxaa gabi ahaanba isbadalay fasixii ay ciyaartoyda kooxaha kubbada cagtu gali jireen bisha July iyo horaanta bisha August.
Jurgen Klopp ayaa cadeeyay in laba todobaad oo kaliya ay fasax gali doonaan ciyaartoyda kooxdiisa Liverpool taas oo la micno ah in isla markiiba ku soo laaban doonaan tababarka si ay diirada u saaraan xili ciyaareedka cusub ee soo socda.
Jurgen Klopp ayaa hadalkan ka sheegay warbaahinta horteeda kadib markii ay kooxdiisa Liverpool guul soo laabasho ah ka gaadhay kooxda Newcastle United oo gool kaga hor martay.
Xili ciyaareedka cusub ee Premeir League ee 2020/2021 ayaa la bilaabi doonaa September 12, waxayna ciyaartoyda Liverpool qaadan doonaan laba usbuuc oo fasax ah waxayna kadib bilaaban doonaan diyaar garowga kulamada saaxiibtinimo ee xili ciyaareedka loogu diyaar garoobayo.
Jurgen Klopp oo fasaxa kooxdiisa ka hadlaya ayaa yidhi: “Waxaanu qaadan doonaa laba todobaad oo fasax ah. Wiilashu waxay gabi ahaanba fasax ka gali doonaan kubbada”.
Klopp oo ka hadlaya sida uu masax ahaan ugu cuslaa go’doonkii fayraska karoona ciyaartoyda kooxdiisa Liverpool ayaa yidhi: “Xaqiiqadii go’doonkii waxa uu wiilasha aad ugu cuslaa aragtida maskax ahaaneed”.
“Wiilashaasi waxaa waajib ku ahayd in ay ku soo laabtaan heerka taam ahaansho ee ugu suurtogalsan ee soo taariikhdii soo laabashada. Markii aanu March galnay go’doonka, waxaan taariikhda suurtogalka ah ee soo laabasho uga fikirayay April 4, waa laga wada hadlay, waxaananu hubaal ka dhignay in aanu diyaar ahayn”.
Klopp ayaa hadalkiisa raaciyay: “Waa hagaag, taasi may dhicin. Waqtiga oo dhami xaqiiqdii wuu ku cuslaa wiilasha”.
Laakiin Liverpool ayaa noqotay kooxdii abid xiligii ugu horeeyay ee xili ciyaareedka oo ay 7 kulan hadhsan yihiin koobka ku guulaysatay taas oo keentay in markii ay koobka hanteen ay lumiyeen heerkii ugu sareeyay ee ay ku ciyaareen.
Balse Liverpool ayaa dhibcihii abid ugu badnaa ee kooxdeeda oo 99 dhibcood ah waxay ugu guulaystay koobka Premeir League waxayna dhaaftay 98 kii dhibcood ee ay xili ciyaareedkii hore Man City koobka halka dhibic ugaga qaaday.
Si kastaba ha ahaatee, laba todobaad oo ay Klopp iyo ciyaartoyda kooxdiisa Liverpool fasax galeen waxay soo laaban doonaan iyaga oo diirada ku haya in ay koobka difaacdaan inkasta oo la hubo in uu noqon doono xili ciyaareed ay kooxo badani soo diyaar garoobayaan.